Madaxda Afrika Magufuli haka bartaan sida lagu soo noqdo adiga oo aan muran ku jirin (Akhri jawaabta wiil Muslim ah) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Madaxda Afrika Magufuli haka bartaan sida lagu soo noqdo adiga oo aan...
Madaxda Afrika Magufuli haka bartaan sida lagu soo noqdo adiga oo aan muran ku jirin (Akhri jawaabta wiil Muslim ah)
(Hadalsame) 15 Nof 2020 – Wiil Tanzanian Muslim ah baa cisho dhaweyd isagoo ka hadlaya “Doorashada dhawaan wadankiisa ka dhacday ayaa la weeydiiyey yaa ku guuleysan doonna?”
Wuxuu si sahlan u yiri insha allah “Madaxweyne Magufuli ayaa soo noqonaya”.
Oo maxaad sidaa u tidhi ayaa la weeydiiyey?” Waxuu ku jawaabay sidan:
Madaxweyne Magufuli waxaa uu ku guulaystay 84%.
Previous articleArag shuruudaha laga doonayo qofkii ka mid noqonaya Guddiga Doorashooyinka? Makula tahay in la buuxiyey?
Next article”Waxaa na duqaynaya daroonnada Imaaraadka” – Tigreega oo sheegay in aag cusub looga soo duuley